ह्वात्तै बढ्यो कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफ, नयाँ भेरियन्टले थप्यो चिन्ता - Aarthiknews
ह्वात्तै बढ्यो कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफ, नयाँ भेरियन्टले थप्यो चिन्ता
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही दिनयता कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड, जमघट र नाराजुलुश गर्ने क्रम बढेसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको हो ।
पछिल्लो पाँच दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यसै साताको आइतबारदेखि आज बिहीबारसम्म १६ हजार ७६२ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । यस अवधिमा ८ हजार ८८० जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने ११२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
फेरी नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणदर ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साउन लागेयता कोरोना संक्रमणदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अहिले कोरोना संक्रमणदर हेर्ने हो भने पनि २४.२ प्रतिशत छ ।’
जम्मा १७ हजारमा कोरोना परीक्षण गर्दा करिब चार हजारलाई कोरोना पोजेटिभ देखिने गरेको उनले बताए । साथै उनले कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि सबैलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम बढेकोले सचेत गराउँदै उनले भने, ‘हामी अहिले कोरोना भाइरस सकिए जसरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरी हिँडडुल गरिरहेका छौँ । यी गतिविधि बढेसँगै हामी सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ । सम्भाव्य तेस्रो लहर न्यूनीकरणका लागि सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइकासाथ पालना गरौं ।’
सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कामहरू अगाडी बढाइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बुधवारसम्म नेपाललाई ८८ लाख ८२ हजार डोज खोप प्राप्त भइसकेको छ । जसमध्ये ५० लाख ४७ हजार डोज खोप प्रयोग भइसकेको छ । बिहीबारसम्म ३५ लाख भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन् । जसमा १५ लाख भन्दा बढीले पूर्ण खोप लगाइसकेको सह प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाले पछिल्लो केही दिन यता कोरोना सङ्क्रमितहरू अस्पताल आउने क्रम बढेको बताए । उनले भने, ‘स्थिर रहेको कोरोना सङ्क्रमण निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्दो छ । अहिले टेकु अस्पतालमा दैनिक १५ देखि २५ जनासम्म कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीहरू इमरजेन्सी कक्षमा भर्ना हुने गरेका छन् ।’
कोरोना संक्रमणदर यसरी नै बढ्दै जाने हो भने तेस्रो लहर आउन सक्ने कुरालाई नकार्न नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक तीन हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन् । यसरी नै संक्रमणदर बढ्यो भने तेस्रो लहर नआउँदा भन्न सकिँदैन ।’
साथै उनले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आएमा सबै उमेर समूह प्रभावित हुने बताए । सम्भाव्य तेस्रो लहर न्यूनीकरणका लागि सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइकासाथ पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
थप नयाँ भेरियन्ट फेला: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड– १९ को डेल्टा प्रजातिको नयाँ उत्परिवर्तन पुष्टि भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको नयाँ भेरियन्ट फेला परेको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ४७ वटा नमुनामा कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको र थप तीन वटामा उत्परिवर्तन (ए वाईआई) भेटिएको छ । यही २०७८ जेठ मध्यदेखि असार मसान्तसम्म देशका विभिन्न भागहरूबाट विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट सङ्कलित नमुनाहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा छनौट गरी ४७ वटा नमुनाहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपाल स्थित कार्यालय तथा दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा परीक्षण गरिएको थियो।
भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ‘डब्ल्युएचओ आइडेन्टीफाइड सेन्टर फर उक्सलेन्स इन जिनोमिस, द इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिस एण्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजी (आईजीआईबी)’ मा ‘सेक्वेन्सिङ’ का लागि असार ३० गते ती नमुनाहरू पठाइएको थियो । उक्त नमुनाहरूको जिनोमिक पहिचान गर्दा सबै नमुनाहरूमा डेल्टा भेरियन्ट (बी.१.६१७.२) पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३ वटामा थप उत्परिवर्तन ‘के४१७ एनम्युटेसन’ भेटिएको छ जसलाई ‘ए.वाईआई’ नाम पनि दिइएको छ ।
यी सहित हालसम्म नेपालमा ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ का रूपमा अल्फा (बी.१.१.७) र डेल्टा भेरियन्ट (बी.१.६१७.२) तथा ‘भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का रूपमा कप्पा भेरियन्ट (बी.१.६१७.१) पुष्टि भएको छ । यी भेरियन्टहरू बढी सङ्क्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने विभिन्न अध्ययनबाट पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी हुन् सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्ला : हाल ३२ जिल्लामा सबै भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, कास्की र रुपन्देहीमा हाल पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।
त्यस्तै, धनुषा, बारा, सप्तरी, सिराहा, दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, गोरखा, स्याङ्जा, वाग्लुङ, तनहुँ, लमजुङ, बर्दिया पाल्पा, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, कैलाली र कञ्चनपुरमा हाल दुई सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।